7 Ecommerce Ndụmọdụ Maka Creatmepụta Ọdịnaya nke Na-agbanwe | Martech Zone
Site na ịmepụta ndị mmadụ na-ahụ ihe na-atọ ụtọ ma dị mkpa, ị nwere ike ịkwalite ọhụhụ saịtị gị na nsonaazụ ọchụchọ Google. Ime nke a ga - enyere aka idozi gị maka mgbanwe ụfọdụ. Mana naanị ịle ndị mmadụ anya na ngwongwo gị anaghị ekwe gị nkwa na ha ga-eme ihe ma nye gị ntụgharị. Soro ndụmọdụ ecommerce asaa a maka imepụta ọdịnaya tụgharịrị.
Mara Onye Ahịa Gị
Iji mepụta ọdịnaya nke na-atọghata ị ga-enwe ezigbo echiche banyere ihe onye ahịa gị dị. Malite site na ịnakọta ụfọdụ data igwe mmadụ na ndị bịara na ibe gị, denye aha na ozi ịntanetị gị, ma soro gị na mgbasa ozi mmekọrịta. Jiri nchịkọta iji chọpụta data gbasara afọ ha, okike, agụmakwụkwọ, na ego ha.
Google Analytics nwere ike inye gị ozi gbasara ihe masịrị ha ma ha gaa n’ .ntanet. I nwekwara ike iji nyocha Twitter na Facebook Page Insights iji chọpụta ihe ndị na-eso ụzọ mgbasa ozi gị dị. Rịọ nzaghachi ndị ahịa banyere ngwaahịa gị, ihe mkpa ha kachasị mkpa bụ, yana otu ị ga - esi nyere ha aka na nsogbu ha.
Ozugbo ị chịkọtara nzaghachi zuru ezu na data igwe mmadụ ị nwere ike ịmepụta onye na-azụ ahịa. Onye na-azụ ahịa bụ ihe atụ nke ezigbo onye ahịa gị, na-akọwa ọgụ ha, mkpali, na isi mmalite ozi ha. Danny Najera, onye ahia ọdịnaya na StateOfWriting.
Oku Gị Iji Mee Ihe
Tupu ị dee na ihe niile dị mkpa CTA, ị ga-ekpebi otu ị ga-esi kọwaa ntụgharị. Kedu ihe mgbaru ọsọ azụmahịa gị? You chọrọ ka ndị mmadụ jiri uru mwepu ego? Jikọọ na listi email gị? Banye n'asọmpi?
Ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ị na-ere ga-ekpebi CTA gị. Ozugbo i kpebiri ihe mgbaru ọsọ a, ị tọrọ ntọala maka usoro ịzụ ahịa gị. Clifton Griffis, onye edemede ọdịnaya si MfeGrad.
Ozugbo i kpebiri ndị na-ege gị ntị lekwasịrị anya ma mepụta onye na-azụ ihe, ị dịla njikere ịhọrọ isiokwu kwesịrị ekwesị maka ọdịnaya gị. Otu ụzọ dị mma iji wepụta isiokwu siri ike bụ itinye aka, ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala ịgha, na obodo ndị dị n'ịntanetị na-atụle isiokwu metụtara ngwaahịa gị.
Facebook, LinkedIn, Google+, na Reddit bụcha ezigbo ebe iji malite ile anya. Jiri ọrụ ọchụchọ iji chọta eri na-atụle ngwaahịa ị na-ere, ma hụ ihe ndị mmadụ na-ekwu. Iji jide n'aka na isiokwu a ma ama, naanị jiri ya mee ya Ahrefs Isi Okwu Explorer ma ọ bụ ngwaọrụ ndị yiri ya.
Uru Ahịa nke Isiokwu Gị
Ọ dị mma yabụ na ị nwere ike ịnakọta ndepụta ogologo ogologo nke echiche enwere ike, mana echegbula onwe gị, anyị ga-emechi ya. Oge eruola iwelata ndepụta ahụ na isiokwu ndị kachasị nwee ike ịba uru gbasara uru ahịa ha bara. CTA gị ga-abụ ihe nduzi gị maka ịchọpụta uru azụmaahịa isiokwu nwere.
Dezie ndepụta gị dabere na otu ha si kwekọọ na CTA gị, wee were echiche ndị kachasị elu tụfuo ndị ọzọ. Echefula na CTA na ọdịnaya gị kwesịrị ịtọzi ụtọ asụsụ, gụgharịa ya, ma mezie ya site na iji ọrụ dịka Ederede.
Ọ bụ oge ikpeazụ iji mepụta ọdịnaya. Malite site na ịme Googling, lee ụdị ọdịnaya na-abịa maka isiokwu ị họọrọ, ma nyochaa ụdị ọdịnaya kachasị rụọ ọrụ. Mmemme dịka Nchọpụta ọdịnaya nwere ike inye gị nghọta miri emi banyere isiokwu ndị dị na isiokwu gị a na - ekekọrịta kwa mgbe, yana ihe kpatara ha ji ewu ewu.
Cheta na isi okwu na-adọrọ adọrọ bụ nnukwu akụkụ nke ihe na-eweta eyeballs iji lelee ọdịnaya gị, yabụ emela ka aha gị bụrụ ihe a ga-echebara echiche. Ghọta na obi obi ndị ahụ iji dee ọdịnaya dị egwu.
Ndị mmadụ na-eme mkpebi ịzụta dabere na mmetụta ha, ọ bụghị ihe ha chere. Edemede na Dee Akwụkwọ m bụ ma ezi ihe atụ nke iji ihe ịtụgharị nke ọma.
Ebee ka itinye oku gi na omume
Tinye CTA gị dị mkpa, ee, ebe ị debere ha dị mkpa nke ukwuu gbasara ntụgharị gị. Ihe mere ndị mmadụ ji pịa ihe dịka njikọ gị na CTA bụ na ha hụrụ na ha bara uru. Ya mere, etinyela ha ebe ọ bụla, ma ọ bụ gbalịa ma jikọta ọtụtụ dị ka ị nwere ike nke ahụ abụghị atụmatụ dị irè.
Gụ site na ọdịnaya gị tinye na CTA ebe ọ bụla ọ dị mkpa maka ọdịnaya a na-atụle. You're na-anwa iduzi ndị mmadụ gaa na ngwongwo gị, ọ bụghị iji ya kụọ ha ihe n'isi. Nwere ike iji ụdị CTA dị iche iche. Fanye ha ozugbo na ederede gị, na popups na-apụ apụ, na mpịakọta popup popup.
Mara Ihe Mgbaru Ọsọ Gị ma Tụọ Ihe Nsonaazụ Gị
Nwee ihe mgbaru ọsọ, ma hụ na ị maara otu ị ga-esi kọwaa ihe ịga nke ọma, yana etu usoro ihe ịga nke ọma gị ga-adị. Yougaghị ama etu usoro gị siri gaa nke ọma ma ọ bụrụ na ị tụghị nsonaazụ gị. Chọpụta ugboro ole ejiri ekesa ọdịnaya gị, mmadụ ole hụrụ ya, ebe azụmahịa gị na-abịa, yana otu ị na-eme nke ọma ma e jiri ya tụnyere ndị asọmpi gị.
Inweta okporo ụzọ ndị ọzọ na saịtị ecommerce gị site na ọdịnaya dị mma bụ nnukwu nzọụkwụ mbụ. Ma anyị anaghị atụle ihe ịga nke ọma nanị dabere n’onye ndị ọbịa bịara; mgbanwe bụ ezigbo ihe mgbaru ọsọ. Ezigbo ọdịnaya kwesịrị iwetara ndị mmadụ ma tinyekwa mgbanwe. Soro ndụmọdụ asaa ndị a iji bulie mgbanwe gị!
Tags: content Marketingmgbanweịtụgharị ọdịnayaecommerceecommerce ọdịnaya